Imaaraadka oo saldhig ciidan ka dhisanaya Berbera - BBC News Somali
Image caption Berbera
Dawlada Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in ay saxiixday heshiis ay ku dhisayso xarun ciidan oo labaad oo ay ka dhisayso geeska Afrika.
Saldhigan cusub, sida laga soo xigtay ilo wareed goob joog u ahaa wadaxaajoodkaas oo ay soo xigatay warbaahinta shephardmedia ee ka faaloota arrimaha sirdoonka ganacsiga oo fadhigeedu yahay magaaladda London waxay sheegtey in saldhiga cusub dowladda Imaaraadku ka dhisanayso magaalada Berbera ee Somaliland, isagoo noqon doona mid ciidamadda Badda iyo cirka.
Heshiiska isafgaradka ah waxaa la saxiixay bishii September markaas oo wafdi heer sare ah oo ka socday Somaliland ay booqdeen wadanka Imaaraadka Carabta.
Dhul 40km oo isku wareeg ah kaabiga ku haya dekadda iyo garoonka diyaaraha Berbera ayaa wargeysku wuxuu leeyahay waxaa la siiyey Imaaraadka Carabta ,muddo 25 sano ah, waxaana wararku sheegayaan in ay dhici karto in la kordhin karo.
Saldhig ayaa Somaliland waxay ku badalan doontaa tababaro xagga ciidanka ah, taageero iyo ilaallin deegaankeeda, iyadoo Somaliland ay xudduud la leedahay Koonfurta aadna ugu baahan tahay ammaan buuxa.
Dhanka kale Maamulka Somaliland wasiirka duulista hawadda iyo gaadiidka cirka, Farxaan Aadan Haybe oo ay BBC wax ka waydiisay arrinkan wuxuu sheegay in uu jiro isfahan arinkaas ku aadan, balse heshiis rasmi ah aan wali la saxiixin.